ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်လား၊ အသစ်ရေးဆွဲသင့်သလား ဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို ရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့နဲ့ ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ပြီး လွှတ်တော်ကို တင်ပြဖို့ မိမိတို့ပါတီမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို (အသံ)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်လား၊ အသစ်ရေးဆွဲသင့်သလား ဆိုတာ ပြည်သူလူထုကို ရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့နဲ့ ပြည်သူ့အသံကို နားထောင်ပြီး လွှတ်တော်ကို တင်ပြဖို့ မိမိတို့ပါတီမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို (အသံ)
စစ်အစိုးရ တဖြစ်လဲ မဲခိုးတက် အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကြား အပ်ကျတာက အစ သိပါတယ် ။
ဒါကို မယုံမရှိပါနဲ. ၊
အန်တီစု ရဲ. NLD အပါအ၀င် အတိုက်အခံ ပါတီ တွေ လည်း ငြိမ်းချမ်းတဲ.နည်းလမ်းနဲ. တိုင်းပြည်
ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ.ပြီးပါပြီ။
ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီ ပေးရမယ်.အချိန်လည်းရောက်
ပြီမို. ဦးသန်းရွှေ အပါအ၀င် စစ်အာဏာရှင်တစ်စုရဲ.
- ပြည်သူတွေဘာလိုတယ်ဆိုတာ နားထောင်နေဖို.မလို